घरेलु कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति कहिले ? - deshparadesh |सीप, समृद्धि र सुरक्षित बैदेशिक रोजगारीका लागि
घरेलु कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति कहिले ?
बैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदारका रुपमा काम गर्न जान संसदीय समितिको सिफारिसमा सरकारले नेपालीलाई लगाएको बन्देज लामो समय वितिसक्दा पनि यथास्थीतिमा नै छ । यसवीचमा पटक-पटक पूर्ण रुपमा बन्देज खोल्ने वा पुनः श्रम स्वीकृति मात्र भएपनि दिने भन्ने विषयमा छलफल भएपनि निश्कर्ष निस्केको छैन ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै मन्त्री गोकर्ण विष्टले घरेलु काममा रहेकाहरुलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिने तयारी गरेपनि संसदीय समितिले वन्देजका विषयमा कुनै निर्णय गर्न नसक्दा सो रोकिएको छ ।
मन्त्री सहित संसदीय समितिमा यसअघि केहि पटक छलफल भएपनि वन्देज हटेको छैन । मन्त्री विष्टले संसदीय समितिमा वन्देज खोल्ने गरी मार्ग प्रसस्त गरिदिन आग्रह गरेका थिए । सो विषयमा समितिबाट आवश्यक निर्णय गरिने आश्वासन दिएको महिनौं वितिसकेको छ ।
सरकारले पुनः श्रम स्वीकृति नखोल्दा खाडीका मुलुकमा घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत हजारौं नेपाली महिला तथा पुरुषहरु घर आउन पाएका छैनन् । यसले परिवारसँग भेटघाट गर्न पाउने उनीहरुको अधिकार हनन मात्र भइरहेको छैन, मानविय रुपमा समेत यो अन्यायपूर्ण देखिएको छ । परिवारका सदस्य विरामी हुँदा समेत वन्देजका कारण पुनः रोजगारीमा जान नपाउने त्रासका कारण उनीहरु स्वदेश आउन सकिरहेका छैनन ।
नयाँको हकमा राज्यले पर्याप्त गृहकार्य गरेर निर्णय गर्न सक्छ । तर जो यसअघि पनि घरेलु कामदारकै रुपमा रोजगारीमा छ उसले आफ्नो रोजगारदाता राम्रो रहेकै कारण पुनः सोही रोजगारदाताकोमा जाने निर्णय गर्दछ । तसर्थ यस विषयमा निर्णय गर्न ढिलाई गर्नु जायज होइन ।